Al-Shabaab oo digniin ka soo saaray Dhalinyarada Shaqo Abuurka loo sameynayo. – XAMAR POST
Farmaajo walaalkiis oo ka fal celiyey Eed culus oo loo jeediyey
Muqdisho Oo weli ka socoto olole nadaafadeed Xilli berri ciid tahay
Dhageyso: Afgooye dad ciida maanta isku diyaariyey oo la xir xiray
DHAGEYSO: General Xuud Oo Ka Hadlay Safarka B/weyne Farmaajo & Guudlaawe
Afhayeenka Al Shabaab Oo Hadlay Tukashadii Salaadii Ciida Kadib
Faah faahin: Kulanka Farmaajo & Museveni Ku yeesheen Kampala
Hargeysa: Liiska Cod bixiyeyaasha Doorashada Oo Lagu Dhawaaqay
Dad Qaba Cudurka Covid 19 oo webi lagu daadiyey Si Kas Ah Dalka…
Meelaha Saaka oo Arbaco Ah Laga ciidayo Soomaaliya Waa Xagee?
Soomaaliya Oo cambaareysay weerarka Yuhuuda Ee Masjidka Al Aqsa
Al-Shabaab oo digniin ka soo saaray Dhalinyarada Shaqo Abuurka loo sameynayo.
By Mohamed Ahmed On Sep 11, 2017
Cabdi Casiis Abuu Muscab Af-hayeenka Dhanka Howlgalada ee Ururka Al-Shabaab ayaa waxaa uu ka hadlay 1000-ka Dhaliyarada ah oo ay dowlada soomaaliya sheegtay in shaqo abuur loo sameynayo,waxaa uuna digniin culus u diray waalidiinta caruurtooda uu sheegay in ay doonayaan ka mid noqoshada Shaqaalaha Cusub.
Al-Shabaab ayaa sheegay in Dowladda ay dooneyso in 16-ka Degmo ee Gobolka Banaadir ay ka shaqaaleysiiso 55-dhalinyaro ah sida uu Hadalka uu dhigay kuwaas oo ka mid noqonaya Ciidamada amaanka ee degmooyinka Gobalka.
Afayeenka u hadlay Al-Shabaab ayaa sheegay in Dhalinyarada laga dhigayo Ciidamo ka hor taga Howlagalada Al-Shabaab taasna aysan u dulqadan doonin.
“Waxaan la dagaalami doonaa dhamaan dadka ka mid noqda Dhalinyarada ay Dowladda Shaqa abuurka u sameyneyso waxaana uga digeyna Waalidiinta Soomaaliyeed in caruurtooda aysan u ogolaanin Mashruuca ay Dowladda Fulineyso” ayuu yiri Cabdi Casiis Abuu Muscab.
Arintaan ayaa walaac ku abuureysa dhalinyarada Soomaaliyeed oo ay Dowladda Soomaaliya u balan qaaday in ay Shaqo u abuureyso.
Ciidamada Dowlada oo Baaritaano ka sameeyay qaar ka mid ah Degmooyinka G.Banaadir.
Mukhtaar Roobow oo Maanta Muqdisho ka Tagaya, Halkuu ku jeedaa?
Mohamed Abdi May 12, 2021
Wafdi Beesha caalamka ka socday oo maanta gaaray Baydhabo
DHAGEYSO: Wasiirka Arimaha Dibada Soomaaliya oo ka hadlay…
Soomaaliya oo ujawaabtay Kenya Kadib Xayiraadii Saaka Duulimaadyada
DHAGEYSO: Maxaa ka cusub maanta Magaalada Baydhabo?
Toogasho ka dhacday Iskuul ku yaalla Dalka Ruushka oo 11 Qof la dilay
Dagaal ka dhacay maanta Duleedka Beled xaawo Ee Gobolka Gedo
Digniintii udambeysay oo loo diray Ciidamada Yuhuuda ee weeraray Al Aqsa
Safarka Madaxweyne Farmaajo Ugu dhoofay Kampala &…
Muxuu Ahmiyad ugu lahaa Guurka Caa’isha Romano Oo…
Kenya oo diyaaradaheeda ka mamnuucday inay yimaadaan…